MAXAA DHEX MARAY XAAJI YUUSUF & CABDI ILEY OO AADAN OGAYN. | Deegaanka News
MAXAA DHEX MARAY XAAJI YUUSUF & CABDI ILEY OO AADAN OGAYN.
Siyaasigga Rugcadaaga ah ee Geeska afrika aadka looga qadariyo Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa laba maalin kahor booqasho ku yimid DDSI isagga oo socdaalkiisa ka bilaabay magaalada Jigjiga ee Xarunta Deegaanka halkaas oo uu ku sugnaa Cabdi Iley.
Yuusuf xaaji ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehliyay ergayga Urur Gobaleedka IGAD u qaabilsan arimaha soomaaliye Danjire Maxamed Cabdi Afey iyo cali qorane oo isagana kamid ah siyaasiyinta reer kenya.
Wafdigan ayaa waxaa markii hore magaalada addis ababa ku casuumay dawladda federalka si ay uga wada hadlaan qorshe uu indhawaalaba xaaji yuusuf gadhwadeen ka ahaa kaas oo ah in ururka ONLF ay tubta nabada qaataan.
Inta badan dadka indha indheeya siyaasadda Geeska Afrika ayaa fajac iyo ama kaag ay ku noqotay markii ay xubnahani miisaanka culus leh uu Cabdi Iley kusoo dhawayn waayay Airpor-ka magaaladda Jigjiga isagga oo taa badalkeeda u diray Deeq laba go’le oo ah wiil yar oo aan waxbadan ka fahmi karin xubnahan iyo sida looga qadariyo guud ahaanba Geeska afrika.
Cabdi Iley oo aad caan ugu ahaa in uu airporka kusoo dhaweeyo dadka aan bulshada muhiimadda badan u lahayn balse uu isaga aad u buun buuniyo sida dumar qaaqaawan oo sheegta in ay fanaaniin yihiin,Dad nolasha kadhacay oo qurbaha kayimid kuwaas oo sheegta in ay ahaayeen xubno isagga taageero iyo kuwa deegaanka dambiya ka galay oo hadda kahor baxsaday.
Ma mudan yihiin in xubnahaasi garoonka loogu tago? yuusuf xaaji se ma mudna miyaa in Garoonka loogu tago? Ujeeda ayaa ah in Cabdi Iley uu xubnahani soo dhawayn fiican u haynin maadaama ay xubnahani Nabad wadaa Cabdi Ileyna uu Nabad diid yahay oo uu mar walba kasoo horjeedo barnaamijna ee lawado.
Shacabka Deegaanka ayaa aaminsan in uu Cabdi Iley mar walba yahay caqabada hortaagan in deegaanka nabad ka hanaqaado hasa ahaatee shakhsiyaadka qaar oo arintaasi shaki kaga jiray ayay maanta u cadaatay taas oo ah cad ceed sacaba laguma qariyo.
Yuusuf xaaji ayaa socdaalkii jigjiga kadib safar dhulka ah maray isagga oo horay u sii qaaday wadada laamigga ah ee isku xidha jigjiga iyo Godey waxaana horay u sii raacay Cabdi Iley isagga oo dib uga soo laabtay Degmada birqod waa Cabdi Iley e.
Dib u soolaabashada Cabdi Iley ayaa lagu micneeyay in ay isagga iyo Xaajigga isku fahmi waayeen intii ay dhexda sii socdeen taas oo sababtay in Cabdi iley duday dibna u soolaabtay.
cabdi Iley ayaa markii uu xaaji yuusuf tagay magaalada Godey kahor istaagay dadkii la kulmi lahaa isagga oo sheegay in aan lala kulmi karin taas oo dadkii ku noqotay fajac iyo amakaag.
Si walbooy ahaataba cabdi Iley ayaa rabay in uu xaajigga kulan labaad kula qaato magaalada jigjiga marka uu kasoo laabto magaalada Godey hasa ahaatee xaaji yusuf ayaa taa badalkeeda ka biya diiday isagga oo diyaarad khaas ah ay ka qaaday magaalada Godey kana Caga dhigtay magaalada Addis ababa oo markii horaba uu safarkiisa kasoo bilaabay.
Isku soo wada duuboo safarkii xaaji yuusuf oo ahaa mid Nabadeed ayaa Cabdi Iley ku abuuray Cabsi iyo wal wal maadaa uu isagga ka macaasho colaada iyo dhiiga shacabka taas oo uu aaminsan yahay in uu kursigga ku siihaysan karo.